आज पुष्पलाल स्मृति दिवस - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
साउन ७ । काठमाडौँ, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठको ३७ औँ स्मृति दिवस बिहीबार मनाईंदैछ । जननायक बीपी कोइरालाको ३३ औँ स्मृतिदिवसको भोलिपल्ट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव स्वर्गीय पुष्पलालको स्मृति दिवस मनाईंने गरिन्छ ।
उनीहरू दुवैको त्याग र बलिदानीपूर्ण संघर्षले नेपाली राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । बीपी कोइरालाको पुण्य तिथीको अवसर पारेर नेपाली कांग्रेस तथा भातृ संगठनहरूले बिबिध कार्यक्रमहरू आयोजना गरिरहेका छन् । त्यस्तै पुष्पलालको स्मृति दिवसका सन्दर्भमा एमाले लगायत विभिन्न कम्युनिष्ट घटकहरूले कार्यक्रम आयोजना गर्ने गर्दछन् ।
स्व. पुष्पलालले २००६ साल वैशाख १० गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना गरेका थिए । कम्युनिष्ट पार्टी तत्कालिन संस्थापकहरूमा नारायाणविलास जोशी, निरञ्जनगोविन्द बैद्य, नरबहादुर कर्माचार्य र मोतीदेवी श्रेठ थिए ।
उनीहरू मध्ये अहिले कोही पनि जीवित छैनन् । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको सुरूआत गरी त्यसलाई उचाईमा पुर्याउन यी नेताहरूको महत्वपूर्ण योगदान रहेको युवा कम्युनिष्ट नेताहरूको बुझाई छ । नेपाली क्रान्तिका सिद्धान्तकारका रूपमा परिचित पुष्पलालले आफ्नो जीवनभर जनताको स्वतन्त्रताका लागि लडे ।
को हुन् पुष्पलाल?
१९८१ असार १५ गते रामेछापको भंगेरीमा जन्मिएका पुष्पलाल जीवन भर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी निर्माणमा दिलोज्यान दिएर लागे । राणविरोधी आन्दोलनका अगुवा सहिद गंगालालका श्रेष्ठका माइला भाइ पुष्पलाले आफ्नो जीवननै देश र जनताको मुक्तिका लागि समर्पित गरे ।
विश्व कम्युनिष्ट घोषणापत्रलाई २००५ सालमा नेपालीमा अनुवाद गरी कम्युनिष्ट सिद्धान्तलाई नेपाली माक्र्सवादी विश्लेषकको पहिचान उनले दिएका थिए । निरंकुशताको अन्त्यका लागि संयुक्त जनआन्दोलनको कार्यदिशा २०१५ सालमा अगाडि सार्ने उनी पहिलो नेता समेत थिए । सो आन्दोलनले २०४६ सालमा आएर पूर्णता पाएको थियो । त्यसकै जगमा उभिएर २०६२÷६३ को जनआन्दोलन सफल भएको विश्लेषकहरूको बुझाई छ । उनको २०३५ साल साउन ७ गते आजकै दिन भारतको नयाँ दिल्ली स्थित अल इण्डिया मेडिकल इन्ष्टिच्यूटमा उपचारको क्रममा निधन भएको थियो ।
उनीसँगै प्रवासमा ‘रूममेट’ भएर सांगठनिक काम गरेका कम्युनिष्ट विश्लेषक मोननाथ प्रश्रितले पुष्पलालको योगदानबाट अहिलेका युवाले त्याग, परिश्रम र कौशलताबारे पाठ सिक्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । जीवनभर पुष्पलालले जनताको पक्षमा लडाईं लड्नुभयो, उहाँ एक कुशल संगठनात्मक व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो भन्दै प्रश्रितले उनीसँग २०१४ साल देखि २०३३ सालसम्म सँगै काम गरेको आफ्नो अनुभव पनि सुनाए।
त्यस्तै एमाले नेता भरतमोहन अधिकारीले संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउने सपना साकार हुन गइरहेको बताए । स्वार्गीय नेता पुष्पलालको सम्झनामा नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूले साउन ७ गते स्मृत दिवसको रूपमा मनाउने गर्दछन् । सो अवसरमा एमालेले बिहीबार उनको तस्बिरमा माल्यार्पण गर्ने र सम्झनामा विविध कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । पुष्पलालको स्मरणमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बुधबारै एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनको योगदानको चर्चा गरेका छन् । ‘श्रमजीवी जनताका मुक्तिका लागि बैचारिक मार्गदर्शन र संगठनात्मक आधार तयार गरी पार्टीलाई वैचारिक रूपमा स्पष्ट, संगठनात्मक रूपमा सुदृढ र सामन्तवादविरोधी संघर्षका रूपमा स्थापित गर्न उहाँले जीवन समर्पित गर्नुभयो’ उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन् । त्यस्तै ओलीले स्वर्गीय नेता पुष्पलालप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली समेत अर्पण गरेका छन् ।